Firefox dia te-ho tonga navigateur default amin'ny iOS miaraka amin'ny fanavaozam-baovao farany | Vaovao IPhone
Apple dia fantatra hatrany amin'ny tsy famelana ny fampiharana an'ny antoko fahatelo afaka manova ny filaharana voajanaharin'ny rafitra fiasan'ny iOS. Saingy toa miova tsikelikely izany. Firefox, toy ny Outlook, Airmail, Mail.Ru, myMail ary Spark dia novaina izay ahafahantsika manokatra rohy web amin'ireo mpanjifa ireo amin'ny alàlan'ny Firefox. Amin'ny tranga Firefox, satria tsy mpanjifa mailaka izy io, ny fanavaozana farany anao dia ahafahanao mampiasa ny iray amin'ireo rindranasa ireo handefasana mailaka mivantana avy amin'ny pejin-tranonkala. Ny fiandohan'ny faran'ny fampiharana mailaka dia manomboka.
Amin'ny alàlan'ny default, ny fampiharana dia manohy mampiasa Safari sy Mail hanokatra rohy na handefasana mailaka, noho izany tsy maintsy ampidirintsika ny fanovana hanovana ny mpanjifa mailaka, amin'ny tranga Firefox na browser raha misy fisoratra mailaka. Amin'ny sary etsy ambony dia afaka jerentsika ny fomba ahafahan'ny mpanjifa mailaka Spark mamela antsika hisafidy toy ny mpizaha toerana misy anao eo amin'ny Safari, Firefox, Chrome na an'ny an'ny fampiharana.
Amin'izany fomba izany Firefox dia te-hanitatra ny fisiany amin'ny tsenan'ny telefaona, izay tsy isan'ny safidin'ny mpampiasa voalohany, na ao amin'ny iOS misy mpanjaka Safari ary amin'ny Android toa an'i Chrome, dia tsy nisy mpifaninana izany.
Ahoana ny fandefasana mailaka avy amin'ny Firefox miaraka amina mpanjifa mailaka an'ny antoko fahatelo
Mba hahafahana manamboatra Firefox ary manomboka izao dia sokafy ny mpanjifan'ny mailaka tsy misy fangarony, raha ny fahitako azy Spark dia tsy maintsy mankany isika Fikirana ary ao anatin'ny sokajy Jeneraly, tsindrio ny volana aprily miaraka amin'ny.
Ny lisitry ny rindranasa mifanaraka amin'ity asan'ny mailaka ity dia haseho eto ambany, toy ny: Outlook, Airmail, Mail.Ru, myMail ary Spark. Ireo izay tsy apetraka amin'ny fitaovantsika dia haseho amin'ny volondavenona fotsy, raha ireo kosa apetraka dia haseho mainty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Firefox dia te-ho tonga navigateur default amin'ny iOS miaraka amin'ny fanavaozana farany
Mampiseho ny hafatra "SIM tsy mety" ny iPhone-ko. Ahoana no hamahako azy?
AT & T "mamono" ilay iPhone tany am-boalohany (2007) amin'ny tambajotran-tseraserany